बाँण the उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, जहाँ तपाईँ सिधा रेखाहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ, बाँणसँग रेखाहरू, र हालको स्लाईड वा पृष्ठमा बिकर्ण रेखाहरू.
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ बाँण थप गर्न सक्नुहुन्छ ढाँचा छनौटद्वारा पङ्क्ति बनाएपछि - पङ्क्ति, र त्यसपछि शैली बाकसबाट बाँण शैली चयन गरि.
तपाईँंले तानेको हालको कागजातमा एउटा सिधा रेखा कोर्दछ.४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस
बाँण सँग लाइन अन्त्य हुन्छ
तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँमा एउटा बाँण सहित एउटा अन्त्य हुने सिधा रेखा कोर्दछ ४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
बाँण/वृत्त सँग लाइन
तपाईँले हालको कागजात तान्नु भएको स्थानमा, बाँण बाट सुरुहुने र वृत्त सँग अन्त्य हुने सीधा लाइन कोर्दछ । ४५ डिग्रीमा लाइन स्थिर राख्न, तपाईँले तानेको बेलामा तल्लो सिफ्ट समात्नुहोस् ।
बाँण/वर्ग सँग लाइन
तपाईँंले हालको कागजात तान्नु भएको ठाउँमा एउटा वर्ग सहित एउटा बाँण र अन्त्यहरू सगँ सुरु हुने एउटा सिधा रेखा कोर्दछ. ४५डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
सिधा रेखा बनाउनुहोस् जुन ४५ डिग्रीको कोणबाट बनेको हो.
बाँण सँग लाइन सुरु हुन्छ
तपाईँंले हालको कागजात तान्नु भएको ठाउँमा एउटा बाँण सहित सुरु हुने एउटा सिधा रेखा कोर्दछ. ४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
वृत्त/बाँण सँग लाइन
तपाईँले तान्नु भएको हालको कागजातमा एउटा बाँण सँग अन्त्य हुने र एउटा वृत्त सँग सुरु हुने एउटा सिधा रेखा कोर्दछ. ४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
वर्ग/बाँण सँग लाइन
तपाईँले तान्नु भएको हालको कागजातमा एउटा बाँण सँग अन्त्य हुने र एउटा वर्ग सँग सुरु हुने एउटा सिधा रेखा कोर्दछ. ४५ डिग्रीमा रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
मार्गदर्शकहरू अनुसार सिमा गरिएको आयाम लम्बाइ प्रदर्शन गर्ने एउटा रेखा कोर्दछ. आयाम रेखाहरू स्वचालित तवरले गणना गरिन्छ र रेखात्मक आयामहरू प्रदर्शन हुन्छ. एउटा आयाम रेखा कोर्न, खोल्नुहोस Arrows उपकरण पट्टि, र क्लिक गर्नुहोस् Dimension Line प्रतिमा,तपाईँंले रेखा सुरु गर्न र आयाम रेखा कोर्न तानेको ठाउँमा माउस सूचक सार्नुहोस्.समाप्त भएपछि छोड्नुहोस्.
यदि तपाईँंले आयाम रेखा वस्तुको नजिकको स्लाईड जस्तै उस्तै लम्बाइ बनाउन चाहनुहुन्छ, तल राख्नुहोस Command Ctrl जब कुञ्जी तान्दा ४५ डिग्रीमा रेखा आयाम अवरोध गर्न, तान्दा सिफ्ट कुञ्जी तल राख्नुहोस.
In LibreOffice कोर्नुहोस, एउटा आयाम रेखा सधै layer called Dimension Lines. मा घुसाइएको हुन्छ यदि तपाईँंले त्यो तह अदृश्यमा सेट गर्नु भएको छ भने तपाईँंले तपाईँंको कुनै आयाम रेखा चित्रमा देख्न सकिँदैन.
बाँणहरू सँग लाइन
तपाईँंले हालको कागजातमा तान्नु भएको ठाउँमा दुबैमा अन्त्य हुने बाँणहरू सँगै सुरु हुने एउटा सिधा रेखा कोर्दछ ४५ डिग्री रेखा अवरोध गर्न,जब तपाईँंले तान्नुहुन्छ सिफ्ट तल राख्नुहोस.
Title is: बाँणहरू